​HirShabeelle: DFS dhex-dhexaad kama ahaan karto Khilaafka Khaliijka
JOWHAR, Somalia- Maamulka ugu da’da yar dowlad goboleedyada ka jira dalka Somalia, ayaa war-saxaafadeed kasoo baxay looga hadlay khilaafka wali ka aloosan waddamada Khaliijka ee xiriirka loogu jaray xukuumadda Qadar.
Warqad uu ku saxiixanyahay Madaxweynaha lagala noqday kalsoonida ee maamulka HirShabeelle ayaa lagu sheegay in dowladda Somalia aysan dhex-dhexaad ka ahaan karin arrimaha waddamada Khaliijka.
HirShabeelle ayaa dowladda Somalia ugu baaqday inay dib u eegto go’aankii hore ee ay ka qaadatay khilaafkaas.
Maamulkan ayaa sidoo kale sheegay in isagoo tixgalinaya rabitaanka shacabka reer HirShabeelle ay la safan yihiin xulafada Sucuudiga.
Dhinaca kale waxaa qoraalkaas lagu sheegay in arrintan aysan munaasab u ahayn Amniga iyo dhaqaalaha Somalia, maadaama labadaas dal ay ka gaystaan taageero laxaad leh.
Ugu dambayn maamulka HirShabeella ayaa cambaareeyay dhammaan cid kasta oo taageerta Argagixisada Somalia iyo kuwa kale ee dunida ka jira.
Arrintan ayaa timid xilli war-saxaafadeed noocaan oo kale ah soo saaray xukuumadda Puntland, waxaana u muuqdaa in labada qoraal ay aad isugu egyihiin.
Lama oga sababta keenta in muddo kadib maamulladan ay la saftaan xulafada Sucuudiga.
Maamulka HirShabeelle oo uu ka jiro khilaaf siyaasadeed ayaa dhawaan eedayn dusha uga tuuray Dowladda federaalka Somalia, kadib markii eedeeyay inay gacan ku leedahay dhibaatada kasoo cosboonaatay maamulkaas.
Wali go’aamadan kama aysan hadlin dowladda Federaalka Somalia ee uu hogaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Puntland: Agaasime Koor oo diiday xilka loo magacaabay
Puntland 03.10.2017. 22:28
BOSASO, Puntland- Wareegto kasoo baxday xafiiska Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, ayaa xilkii ka qaadey Agaasimhii Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland, Cabdi Nuur Cilmi (Koor).
Wareegtadaan ayaa lagu magacaabay Agaasime ...
DAAWO: ​Madaxweynaha DDSI oo ka hadlay arinta Qalbi Dhagax
Soomaliya 05.09.2017. 14:18
​Jaahwareer ka taagan Taliska Booliiska Puntland
Puntland 05.09.2017. 13:17
​Camey “Shirka Kismayo Maslaxadi kuma jirto ee dib ha loo dhigo”
Puntland 03.10.2017. 14:48
Eithiopia saami maku yeelanaysaa Dakhliga Dekedda Bosaso?
Puntland 02.10.2017. 09:13
​Dadka la nool xanuunka HIV oo samaystay Dallad [Sawirro]
Puntland 30.09.2017. 12:47
Sacuudiga oo Xuduuda u furay Xujayda Qadar
Caalamka 17.08.2017. 12:20
​Gaas oo ka hadlay dekedda Bosaso iyo Qalbi Dhagax [Daawo]
Puntland 29.09.2017. 01:45
Muuse Biixi oo hadlay booqashada Farmaajo ee Hargeysa iyo kulankii Addis Ababa 18.02.2020. 10:54
Milatariga Soomaaliya: Waxaan dilnay 13 kamid ahaa Al-Shabaab 18.02.2020. 06:39
Dowladda Kenya oo la wareegeysa gaadiid loosoo wadday Soomaaliya 18.02.2020. 06:25
Abiy Axmed oo baahiyey khariirad liddi ku ah midnimadda Soomaaliya 17.02.2020. 20:55
Deni oo sharaxaad ka bixiyey shirka uu kaga dhawaaqay Boosaaso 17.02.2020. 19:05